Kufuphi namasango oKusa ⭐ Unikezelo olukhethekileyo ⭐ I-1BR yale mihla. ⭐
Indlu esandula kunikwa isitayile saseScandinavia esisembindini weVilnius-yimizuzu nje eli-10 kude neGates of Dawn. Le flat idlamkile kwaye iqaqambile njengoko ilanga likhazimla ngeefestile.
Ishampu yasimahla, ijeli yeshawa kunye nezinto zangasese.
Ikofu yasimahla kunye neti.
Ukufikelela kwi-WiFi yasimahla.
Indawo yokupaka yasimahla kwisiza.
Eli khaya linokuhlalisa ngokukhululekileyo abantu abane (ibhedi ephindwe kabini kwi-mezzanine kunye nebhedi yabantu ababini ukuba balale phantsi).
Kuya kubonelelwa ngamashiti amatsha, iitawuli kunye nezinto zangasese. Akukho sidingo sokukhathazeka malunga neepleyiti, iikomityi zokusika kunye nezixhobo zokupheka ezisisiseko i-ether. Iphangalele kwaye ithambile, inefenitshala epheleleyo kwaye ixhotyiswe kakuhle ukuzalisekisa iimfuno zakho ngexesha lokuhlala kwakho. Unokufikelela ngokupheleleyo ekhitshini, zonke izixhobo ezifunekayo zinikezelwe.
Nje ukuba uthathe isigqibo sokuphonononga iVilnius, unokuthatha uhambo lwemizuzu eli-10 kwaye ufike kwenye yezona ndawo zibalaseleyo zembali yaseVilnius 'Isango lokusa'. Ukusuka apho, kuya kufuneka ugcine intloko yakho phezulu kwaye uthathe i-Vilnius emangalisayo yoyilo lwedolophu yakudala. Iikhefi, iindawo zokutyela, iiklabhu, iibhari nazo zikwakufuphi.
Siya kusoloko sisesandleni sakho ukusuka ekungeneni ukuya ekuphumeni. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo - usithumele umyalezo. Sisoloko siphendula ngoko nangoko!